HomeWararka MaantaRodgers: Liverpool Wey Uga Dhamaatay Horyaalkana Manchester City Ayaa Iska Leh
Tababaraha naadiga Liverpool, Brendan Rodgers ayaa niyadiisa u sii daayay in kooxdiisu ay ka samirtay qaadista horyaalka isla markaana u haneeyey kooxda Manchester City inay sanadkan iyadu calfanayso oo ku guulaysanayso Priemier League, kadib markii ciyaar mucjiso ah kooxdiisa barbar dhac 3-3 ah ay ku qabatay kooxda awood yaraanta ay bidaysay ee Crystal Palace habeenkii xallay ahaa.
Kooxda Martida ahayd ayaa saddex gool ciyaarta ku hogaaminaysay ilaa daqiiqadii 75 aad kulankii ka dhacay gegida Selhurst Park kuwaas oo ay u dhaliyeen xidigeheeda Joe Allen, Daniel Sturridge iyo Luis Suarez.
Laakiin ka daba tagii ugu cajiib sanaa dunida oo ay samaysay Crystal ayay ku barbaraysay Liver saddex gool oo ay kala dhaliyeen Damien Delaney oo gool magaciiisa ku qoray iyo laba gool oo uu u saxeexay Dwight Gayle , ayaa dhibcaha u qaybiyey labada naadi, waana taas sababta uu tababare Rodgers ugu haneeyey kooxda tababare Manuel Pellegrini inay hananayso horyaalka sanadkan.
” Waxay ila tahay inaanu caawa (xallay) guul u baahnayn, taas ayaa ahayd jidka kaliya ee hawsha noo fududayn lahaa, si aanu cadaadiska ugu sii hayno Manchester City,” ayuu ku yidhi Sky Sports markii ciyaartu dhamaatay.
“Imika laba ciyaarood oo ay garoonkooda ku yeelanayaan ayay haystaan, xataa haddii ay laba ciyaarood oo adagi u hadhsanaan lahaayeen, laakiin anagu guul uun baanu u baahnayn caawa (xallay), marka waxay ila tahay in Manchester City tagtay oo ku guulaysanayso labada ciyaarood ee u hadhay horyaalkana sidaas ku qaadayaan.
“Laakiin anaga ahaan, Wuxuu noo ahaa xili ciyaareed qaali ah ilaa hadana noo yahay. Inaanu 81 dhibcood gacanta ku haysanaa waa noo hanti weyn iyo halkaanu taaganahayba.
“Waxaa na soo gaadhay niyad jab weyn imika, laakiin markale ayaanu is abaabuli doonaa. Imika ciyaar ayaanu ku ballansanahay garoonka Anfield oo ah taanu horyaalka ku soo khatimayno, waxaananu ka fikiraynaa wixii intaas ka dambeeya sidaanu dib u habayn isugu samayn lahayn eenu horumar la taaban karo u gaadhsiin lahayn naadiga.”
Dhinaca kale tababare Rodgers wuxuu dhaliil weyn u soo jeediyey hanaankii difaaceed ee kooxdiisu soo bandhigtay, isagoo tilmaamay inay awoodi waayeen inay xejistaan saddex gool oo qiimo u lahaa.
“Waxaa nagu dhacday difaac la’aan xoog ah runtii. Waxay sameeyeen dedaal aan caadi ahayn , si ay nooga daba yimaadaan, waanay sameeyeen. In kastoo marka ciyaartu marayso 3-0 qaab ciyaareedkan casriga ah ( habka loo ciyaaro kubada wakhtigan casriga ah) ay adag tahay inaad goolal kale sii dhalisaa, laakiin dhab ahaan, habkii aanu kubada u maamaulaynay anagoo ku raaxaysanayna iyo awoodii aanu ku keenay 3 da gool… waxaa markaas gacanta noogu jiray inaanu u maarayno ciyaarta si ka sii fiican sidaasi.”